मंसिरको चुनावी तयारी सुरु, दल दर्ता संख्या कति पुग्यो ? - Deshko News Deshko News मंसिरको चुनावी तयारी सुरु, दल दर्ता संख्या कति पुग्यो ? - Deshko News
मंसिरको चुनावी तयारी सुरु, दल दर्ता संख्या कति पुग्यो ?
आगामी मङ्सिर १० गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा दलहरूको उत्साहजनक सहभागिता हुने भएको छ ।
दल दर्ताका लागि एक दिन बाँकी रहँदा शुक्रबारसम्ममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने राजनीतिक दलको सङ्ख्या ६४ पुगेको छ। दल दर्ताकाे लागि भदाै ११ गतेसम्म अर्थात अाजसम्मकाे समय मात्रै छ । अाजकाे गाेरखापत्रमा खबर छ ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार, व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार अध्यक्ष रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम (प्रजातान्त्रिक), उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, कमल थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, पुशपति शमशेर जबरा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) र विश्वेन्द्र पासवानले नेतृत्व गरेको बहुजन शक्ति पार्टी नेपाल लगायतले भने दल दर्ता गर्न बाँकी छ ।